D-Link wuxuu ku biirayaa Shabakadda Hal-abuurka Furan | Laga soo bilaabo Linux
D-Link wuxuu ku biirayaa Shabakadda Hal-abuurka Furan
Maalmo ka hor war ayaa soo baxay in D-Link la taxay gudahood tirada kaqeybgalayaasha ee abaabulka Shabakada Hal-abuurnimada Furan (OIN), oo ah nidaam deegaan oo Linux ah oo lagu ilaaliyo sheegashada patent.
Waa in la ogaadaa in ka badan 70% alaabooyinka Xiriirka D-Link iyo Xiriirinta waxaa markii hore lagu hirgeliyaa barnaamijyada furan ee softiweer. Shirkaddu waxay sii wadaa u-doodista barnaamijyada furan ee furan iyo patent-ka oo aan ku xadgudbin, waxaana ka go'an inay wax ku biiriso bulshada OIN si loo wado hal-abuurnimo.
Xubnaha by Afran Qalo ogolaado inaadan xareynin sheegashada patentka waxayna xor u yihiin inay oggolaadaan adeegsiga tikniyoolajiyadda lahaanshaha ee mashaariicda la xiriira nidaamka deegaanka ee Linux.
Xubnaha OIN waxaa ka mid ah in ka badan 3.300 oo ganacsi, bulshooyin, iyo ururo ah kuwaas oo saxiixay heshiisyo shati si ay ula wadaagaan shatiyada. Ka mid ah kaqeybgalayaasha ugu muhiimsan ee OIN, oo bixinaya sameynta koox shatiyo ilaalinaysa Linux, shirkadaha sida Google, IBM, NEC, Toyota, Renault, SUSE, Philips, Red Hat, Alibaba, HP, AT&T, Juniper, Facebook, Cisco , Casio, Huawei, Fujitsu, Sony iyo Microsoft.
In kabadan 70% shabakada D-Link iyo xalalka isgaarsiinta ayaa hirgaliyay softiweer il furan tan iyo bilowgii wejiga cilmibaarista iyo horumarka, ”ayuu sharaxay Mark Chen, madaxweynaha D-Link. "Waxaan haynaa oo aan sii wadi doonnaa u doodista OSS iyo patent-ka aan ku xadgudubka, waxaana rajeyneynaa inaan wax ku biirino bulshada OIN si loo kobciyo hal-abuurnimada."
“Waan ku faraxsanahay in shirkadda D-Link ay adeegsaneyso furaha furan ee wax soo saarkooda, waana soo dhaweyneynaa sida ay uga go’an tahay in patent-ka aan loo adeegsan ee loo yaqaan 'Linux kernel' iyo tikniyoolajiyada isha furan ee ku xigta ee looga baahan yahay ruqsadda OIN.
Faafinta guud ee qiyamka marka laga hadlayo yareynta halista patent-ka oo ay weheliso qaadashada ballaaran ee geeddi-socodka maaraynta u hoggaansanaanta adag ayaa abuuraysa xaalad maamulidda hantida aqooneed ee ay OIN ku kobciso dhammaan xubnaha bulshada 'ayuu yiri Keith Bergelt, Maamulaha Shabakada Hal abuurka Furan.
Shirkadaha saxiixa waxay helayaan marin u lahaanshaha lahaanshaha ee OIN iyada oo lagu beddelayo waajibaadka in aan laga dacweynin isticmaalka tiknoolajiyada loo isticmaalo nidaamka deegaanka ee Linux.
Waxyaabaha kale, iyada oo qayb ka ah ku biirista OIN, Microsoft waxay u wareejisay ka qaybgalayaasha OIN xuquuqda ay u leeyihiin inay isticmaalaan in ka badan 60 oo shatiyadeeda ah, iyagoo ballanqaaday inaysan u adeegsan doonin Linux iyo barnaamijyada furan ee furan.
Heshiiska u dhexeeya xubnaha OIN wuxuu khuseeyaa oo keliya qaybaha ee qaybinta kaas oo hoos yimaada qeexitaanka nidaamka Linux.
Liiska hadda waxaa ku jira xirmooyinka 3393, oo ay ku jiraan Linux kernel, barnaamijka Android, KVM, Git, nginx, Apache Hadoop, CMake, PHP, Python, Ruby, Go, Lua, LLVM, OpenJDK, WebKit, KDE, GNOME, QEMU, Firefox, LibreOffice , Qt, systemd, X.Org, Wayland, PostgreSQL, MySQL, iwm.
Marka laga soo tago waajibaadka gardarrada ah, ee ilaalinta dheeraadka ah ee gudaha OIN, barkad shatiyeed ayaa la sameeyay, oo ay ku jiraan shatiyadaha ay iibsadeen ama ku deeqeen kaqeybgalayaasha la xiriira Linux.
Barkadda patent-ka ee OIN waxaa ku jira in ka badan 1300 shatiyeed. Oo ay ku jiraan OIN Hands waa koox shatiyeyaal ah, oo ku lug leh mid ka mid ah tiknoolajiyada tixraaca ugu horreysa ee abuuraya nuxurka websaydhka firfircoon ee saadaaliyay nidaamyada dhacdooyinka sida Microsoft's ASP, Sun / Oracle's JSP, iyo PHP.
Wax ku biirinta kale ee muhiimka ahi waa helitaanka 2009 ee 22 Microsoft patent-ka., oo horey loogu iibiyey daladda AST iyada oo loo leeyahay rukhsad alaabooyinka 'isha furan'. Dhammaan xubnaha OIN waxay fursad u leeyihiin inay u isticmaalaan shatiyadan bilaashka ah.
Sax ahaanta heshiiska OIN waxaa cadeeyay go, aanka Waaxda Cadaalada ee Mareykanka, oo ku dalbatay in danaha OIN la tixgaliyo iyadoo la tixraacayo heshiiska ku saabsan iibka shatiyada Novell.
Finalmente hadaad xiisaynayso inaad waxbadan ka ogaato Ku saabsan qoraalka, waxaad ka eegi kartaa faahfaahinta ku jirta xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » D-Link wuxuu ku biirayaa Shabakadda Hal-abuurka Furan
Android 2 Horudhaca Horumariyaha 12 horey ayaa loo sii daayay